I-Black Hills Rambler-Tiny House - I-Airbnb
I-Black Hills Rambler-Tiny House
Indlu encane ibungazwe ngu-Kristi
Uma uke wafuna ukuzama "ukuphila okuncane" indlu yethu encane enhle ilungile. Leli khaya elakhiwe ngesandla litholakala endaweni yomndeni wethu, kepha kude nendlu enkulu ukukunikeza ubumfihlo obufunayo.
Ngenkathi ikunikeza ithuba lokunqamula, i-Rambler izungezwe ihlathi elihle lezwe kodwa futhi itholakala endaweni ekahle nje ngamamayela angu-3.5 ukusuka edolobheni laseCuster, SD. Ukufinyelela kalula ku-Hwy 16/385 futhi kusondele kubo bonke ubuhle obunikezwa yiBlack Hills.
Izilwane ezifuywayo zamukelekile nokho indawo ayibiyelwanga ngakho-ke sicela ugcine ingane yakho enoboya entanjeni. Indlu ineshawa kasayizi ogcwele nendawo eningi yokuphumula. I-grill endaweni ye-patio futhi ujabulele ukubuka izilwane zasendle zendawo ziklaba egcekeni.
4.91 · 207 okushiwo abanye